Fitsidihana tamim-pomba fanajana ny Filohan’ny Antenimierandoholona nataon’ny Solontenan’ny FAO (Food Alimentation Organisation) sy ny Masoivohon’i Alemaina miasa sy monina eto amintsika. – Sénat de Madagascar
November 13, 2017 RAMBELO Abel NIRINA
Noho ny fifandraisana efa nisy sy mbola hisy eo amin’ny Firenena Afrikana sy i Madagasikara dia tonga nitsidika ny Filohan’ny Antenimierandoholona RAKOTOVAO Rivo tetsy amin’ny Lapan’Anosikely, ny Alatsinainy faha-13 Novambra 2017, ny Solontenan’ny FAO miasa sy monina eto amintsika Andriamatoa PATRICE Talla Takoukan.
Andriamatoa PATRICE Talla Takoukan dia nanatsidika fa apetraka ny « alliance parlementaire » eo amin’ny roa tonta ary ampiana tosika hanentanana ho amin’ny fiarovan’ ny ara-tsakafo
Nambaran’ny Filoha RAKOTOVAO Rivo tamin’izany fa mitohy hatrany ny fiaraha-miasa sy ny fifandraisana eo amin’ny Parlemantera sy ny Governemanta ary mifameno ireo. Madagasikara no isan’ny Firenena voalohany mandray anjara mavitrika amin’ny fanatanterahana ny Fanjariantsakafo eto amintsika sy ny fifandraisana amin’ny tontolo ambanivohitra.
Taorian’izany dia noraisin’ny Filohan’ity Andrimpanjakana Faharoa ity ihany koa ny Ambasadaoron’i Alemaina HARALD Gehrig izay miasa sy monina eto amintsika.
Tonga niarahaba ny Filohan’ny Antenimierandoholona RAKOTOVAO Rivo tonga soa eo amin’ny toerana maha- Filohan’ny Antenimierandoholona ny tenany. Nanasa ireo Loholona ihany koa izy hitsidika ny Parlemantera any aminy.
Ny Filoha RAKOTOVAO Rivo dia nirary ny hitohizan’ny fampandrosoana eo amin’ny Firenena roa tonta ka ho ohatra ho alaintsika tahaka i Alemaina amin’izao fotoana izao izay fotoana hananganana ny Governemanta sy ireo Parlemantera Mpanao Lalàna any aminy. Niteny koa izy fa manampy antsika amin’ny fanatanterahana ny fiifidianana eto Madagasikara i Alemaina mba hisian’ny fahamarinan-toeran’ny Andrimpanjakana sy ny resaka politika eto amintsika ary hivoaka mpandresy ny Malagasy amin’izany. Fifidianana mahomby no hisy amin’izany ary hanaraka ny drafitra ara-demokratika. Nolazainy ihany koa fa tsy hisy ny fanemorana ny datin’ny fifidianana.